Inona no azonao atao amin'ny ankizivavy amin'izao fotoana izao - Ny LAHATSARY amin'ny CHAT #1 - hitsena ny zazavavy, na lehilahy online!
Inona no azonao atao amin'ny ankizivavy amin'izao fotoana izao
Ary heveriko fa tsara sy milamina
Hay sy miala tsiny aho izao, na dia ny lohahevitra efa-taona aho, manana Olana toy izany koa aho no manoratra amin'izao fotoana izaoAry satria hitanao ity loza mitatao tena haingana tao amin'ny Google aho mieritreritra ihany koa ny fihaonana hafa eto. Aho mieritreritra ankehitriny fa handeha aho mba hilalao miaraka amin'ny ankizivavy aho fivoriana voalohany, mini-Golf, dia kely ny alalan ny Valan-javaboary sy ny avy eo amin'ny eo an-toerana pub amin'ny coke, na ny zavatra any.
Tsy te-ho eo anoloan'ny azy ny fisotroana ho an'ny fotoana voalohany.
Manantena aho fa afaka manampy olona. ary raha ny hevitrao aho hitondra na inona na inona Mbola manana ny roa hafa dia soso-kevitra fotsiny no mila mieritreritra momba izany fotoana izao, raha ny marina aho tena famoronana. Sinema araka ny efa voalaza, dia, indrisy, inona no ho ahy lehibe tombon-dahiny. Tsara ny andro, tsara tarehy lake handeha milomano mba hahazo ahy amin'ny manodidina izay afaka. Tao anaty gilasy efi-trano, afaka mipetraka sy ny vatany. Mandeha an-tongotra. na fotsiny amin'ny lahatsary store sy roa movies ny hofan-trano sy cozy niakatra teo am-Parafara ny mijery. miankina amin'ny zazavavy aho no niaraka tamin'ny namako taloha olon-tiany tamin'izany fotoana, eo amin'ny. raharaha, efijery namely hitsambikina, satria izaho sy ianao dia amin'ny zavatra fa heveriko fa somary tsy fahita firy^^. Azonao atao ihany koa ny na inona na inona velona ny Seho mba handeha hiaraka amiko any amin'ny manodidina dia zavatra saika isaky ny faran'ny herinandro, ary ny karatra dia efa hita hatramin'ny Euro avy eo dia hijanona ho zava-pisotro kely kokoa avy tanteraka. Na raha toa ka mandany be dia be ny zavatra tsy mino ny Fivoriana voalohany mihitsy aza aho dia tsy afaka koa ny zava-Crimp sakafo Hariva fa feno fahafinaretana aho mandrakizay miaraka amin'ny fianakaviako, dia nanao anareo ho tonga mba haka ny taratasy, satria dia izany no, ohatra, ny mpanafika sy ny mety ho sakafo, ny niharam-boina no ao amin'ny trano Fisakafoanana, toy ny hoe izy no maty ary avy eo dia mila mandinika izay ny mpanolana, ary avy eo dia misy ihany koa ny vavolombelona sy ny zava-drehetra, izay tsy manam-paharoa traikefa ho ahy, fa heveriko fa tsy mora. Ho ahy, dia tsotra fotsiny ny zavatra manan-danja indrindra izay afaka be resaka samy hafa. Ary matetika aho no nanao ny fahadisoana, ary manapa-kevitra ny handao fa indrindra ny fisainana avy eo, 'Hamm. tsy manana drafitra' satria tsy maintsy maka avy amin'ny fiandohana, ny hevitro, ny lalana ao an-Tanana alohan'ny anareo hahazo ny 'Best-namana-vatasarihana'. Afaka, mazava ho azy, ho samy hafa ny tsirairay. manao ahoana ny momba ny hevitra amin'izao fotoana izao ny ahy no zava-dehibe ihany koa. Tena afaka milaza aho fa efa namintina eto indray. ny hevitra dia, mazava ho azy, ny volavolan-dalàna handeha aho rehefa miaraka aminy eo ny alakamisy. Izaho ihany no afaka mangataka fa ny fanehoan-kevitra amiko ary manome ny heviny momba izany teo aloha aho, misokatra ny loza mitatao intsony. XD tsara fiarahabana avy amiko rehetra amin'ny fandrahonana izany ary manantena aho fa hanampy mety ho manerana. fandrahonana na fandrahonana tsy drafitra ho ahy aza dia ho toy izany ny fanakianana ny tsipelina. Nieritreritra aho dia efa. Noho izany, ao amin'ny taona, mihinana avy dia mazava ho azy fa somary lafo vidy sy ny Volt ihany koa ny kely Be loatra ny zavatra Tsara. Ahoana no mety ho amin'ny sinema. Raha io Daty, izay mety ho ny fomba tsara indrindra mba hahazo ny kely kokoa. Tiako ny hihaona ahy ny zazavavy ho namana izy ireo, ary tsy nangataka manokana raha toa ka te. Indray mandeha nilaza izy fa noho ny voalohany. Herinandro ho nanantitrantitra satria ny sekoly, fa afaka manao zavatra miaraka. Ary indray andro dia hoy izy hoe: Eny, mazava ho azy. Hi, ny olona izay milaza amiko ny fomba hahazoana ny ankizivavy iray mba hahazo iray irery fihaonana, dia ny zazavavy tao am-pianarana, irery na oviana na oviana, na irery any ho any. Hoy ary aho misaotra anao mialoha noho izany ny Zazalahy aho nihaona, te hihaona amintsika. Isika roa toy ny lamaody ary ny mozika. Izay afaka mandeha any amin'ny fivoriana voalohany, izay ny vola lany be. Misaotra anao mialoha. (Lehibe ny tanàna) Ny sipa nanasa ahy vao mba hihaona Roa buddies (izahay tanteraka ny ankizilahy sy ny ankizivavy - taona) ary ny voalohany sy ny faharoa ny Fivoriana, dia nanao ny karazana 'lalao alina', nanontany ahy izy mba drafitra ny fahatelo hariva, inona no azonao atao. PS: NY sarimihetsika izahay dia te-hijery, satria mipetraka moana. Tokony ho zavatra Mahafinaritra.
Ka rahampitso aho nihaona tamin'ny tovovavy iray avy amin'ny sekoly ho an'ny Fotoana voalohany.
Samy tia miaraka, ary ankehitriny aho dia te hanontany aho raha tokony kiss teo ny Fivoriana voalohany. Raha izany, ahoana.
Misy afaka manampy ahy.
Aho Janoary sy te-hankalaza. Na izany aza, tsy azoko ny antoko biby. Tsy maintsy mandeha aho izy no mieritreritra ny momba amin'ny namany ny faran'ny herinandro, fa tsy tokony ho lafo loatra. Raha tsy izany, dia mba tiako ny miaraka mankalaza izany miaraka amin'ny olona aho, tsy te-hipetraka manodidina ao an-trano sy tao amin'ny cinema na disco, aho eo amin'ny fihetseham-po. Tiako ny manao zavatra Mahafinaritra sy tsy hay hadinoina. koa amin'ny fanatanjahan-tena.
Ny mozika dia milamina sy afaka manana fotoana tsara
moa ve ianao manana hevitra. Jana, izaho sy ny ankizivavy vao nanaiky antsika amin'ny iray amin'ireo toby. Ankehitriny dia efa ahy ianao no nieritreritra na dia talohan'ny Daty ny mamihina, amin'ny Fivoriana voalohany, rehefa fiarahabana anao. Teo aloha teo, nanontany tena aho hoe, tokony I. ianao dia tsara kokoa ny tsy mangataka amin'izao fotoana izao, ao ny raharaha ny WhatsApp, hoy aho hoe tsara aho, vao manao sy ny tsy hanontany azy ireo ihany koa aho Ka handeha hanao dia eo amin'ny Fivoriana voalohany. Aho tena azo antoka ny momba izany anefa aho, satria te hahalala zavatra ianao mieritreritra ry zalahy, ary raha ny hevitrao fa ny mampihomehy mandritra ny Fivoriana voalohany. Hey Fiaraha-Monina.) Androany aho dia hihaona ny tovovavy ho an'ny voalohany Ny fotoana. Isika roa ary manana be dia be iraisana Isika hihaona amiko any an-tanàna. Manana roa soso-kevitra ny ahy fa ny Fivoriana voalohany. Inona no azontsika atao miaraka. (tsy toy ny mihazakazaka be.
Rahoviana no Fotoana tsara ho oroka, satria efa niresaka matetika momba ny foto-kevitra aminy.
Ary ny fomba ahafahako mandeha matoky ny Fivoriana. Noho ny fotoana aho tena sahiran-tsaina sy ny mieritreritra momba ny fotoana rehetra mba hanafoana.
Ary Anja, inona no Tsy Gos.
Misaotra anao mialoha, ny andro hafa miaraka amin'ny buddy izay dia zokiny kely sy ny tena tsara amin'ny ankizivavy ao amin'ny fandihizana. Efa mpijery hatramin'ny iray ora miaraka amin'ny ankizivavy voalohany. Ary tapa-kevitra niaraka tamin'ny dihy. Mieritreritra aho fa ny hanokatra ny natiora. Ary izaho aza tsy mahafantatra kanefa aho dia niaraka nandihy. Koa satria izaho ihany no vao lasa aho, ary raha tsy misy afa-tsy amin'ny trano antoko. Fa ny fanontaniana. Tsy tonga nahatsikaritra ny dia avy any ivelany ihany koa ny raharaha ny ankizivavy. Fa dia mandeha ao amin'ny fandihizana. Afaka ianao mahafantatra, amin ny fandihizana, ny ankizivavy dia mety hianatra ny hitarika ny fifandraisana. Manoratra ny zavatra niainany sy ny fanehoan -) efa ho andro nahaterahan'i atsy ho atsy (amin ny volana aogositra) ary tsy mahafantatra hoe inona no mety hatao amin'ny fitsingerenan'ny nahaterahako. Manana kambana vavy, izay ihany koa ny tsy manana hevitra.
Isika samy naniry zavatra lafo kokoa noho ny taonany, noho izany dia te-hanao ny andro nahaterahan'i fankalazana lafo vidy.
Isika dia tanteraka zazavavy. Aho hijery fotsiny toy ny maro hafa, Schindler ny lisitra. Ny zava-niseho tamin'ny zazavavy kely mitafy ny mena akanjo.
Inona no miaraka izay.
Ny Sarimihetsika manontolo dia mainty sy fotsy. Inona moa izany amin'ny mena akanjo. Ny fankatoavana. Tiako hambara, rehefa tapitra ny tovovavy dia hita indray mandeha indray ny maty.
Izany zavatra izany.
Hi ry zalahy, handeha aho mba hihaona tamin'ny alakamisy noho ny faharoa dia ny Fotoana amin'ny zazavavy. Teo amin'ny fivoriana voalohany dia nandeha McDonalds ary niresaka. Izy, raha ny marina ihany ny teo Aloha dia niresaka momba ny. Na izany na tsy izany, dia nanangana ny Fivoriana faharoa sy ny karazam-te-hijery ny vatana ny fifandraisana. Tsy afaka ny hanao izany, fa raha tsy feno. mieritreritra izahay nitsena anay tamin'ny namana izany. Aho noho izany, amin'ny alalan'ny Chat, mangataka Fivoriana, raha ny marina ny tena Daty na ny namana Fivoriana. ianao avy eo hoe: 'Namana' ary ny fanirianao dia nandeha mba hitsena anao. Na izany dia midika hoe na inona na inona aho ary nanontany tena fanontaniana adala aho mieritreritra.
Miarahaba, izaho no taona sy te-hihaona amiko tsy ho ela ho amin'ny ankizivavy.
Aiza aho no tokony hiaraka ary inona no tokony ataontsika any. PS andeha hiaraka amiko any amin'ny sinema na fisotroana kafe.
Данія: жыццё звычайных людзей, як жанчыны апранаюцца - цікавы сайт
hihaona manambady ny firaisana ara-nofo Niaraka fisoratana anarana online chat roulette fisoratana anarana video Mampiaraka online mba hitsena ny lehilahy ny lahatsary amin'ny chat room maimaim-poana ny lahatsary amin'ny chat Mampiaraka tsy misy fisoratana anarana Chatroulette avy amin'ny finday maimaim-poana video firesahana amin'ny efi-trano miaraka amin'ny ankizivavy maimaim-poana amin'ny aterineto jereo ny lahatsary amin'ny chat